ကျိုက္ကလဲ့-ပုရွက်ဆိတ်ကုန်းကြားရှိ ရထားလမ်း နှစ်လမ်းစလုံးကိုပိတ်ပြီး လမ်းအဆင့်မြှင့်မည်၊ ရ? - Yangon Media Group
ကျိုက္ကလဲ့-ပုရွက်ဆိတ်ကုန်းကြားရှိ ရထားလမ်းနှစ်လမ်းစလုံးကိုပိတ်၍လမ်း အဆင့်မြှင့်မည်ဖြစ်သဖြင့် ယင်းရထားလမ်းကို အသုံးပြုနေသောရထားစီးခရီးသည်များအတွက် YBS 18 နှင့် YBS 92 ယာဉ်လိုင်းများအား လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲ တိုးချဲ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။ ကျိုက္ကလဲ့-ပုရွက်ဆိတ်ကုန်းကြား (၃ ဒသမ ၇၅)မိုင်အကွာအဝေးရှိ ရထားလမ်းပိုင်းတွင် မင်္ဂလာဒုံဘူတာ၊ မင်္ဂလာဒုံဈေးဘူတာ၊ ဝေဘာဂီဘူတာ၊မြောက်ဥက္ကလာပဘူတာ၊ပုရွက်ဆိတ်ကုန်းဘူတာစုစုပေါင်း ငါးဘူတာရှိပြီး ယင်းရထားလမ်းပိုင်းအဆင့်မြှင့်တင်ချိန် တွင် အဆိုပါငါးဘူတာသို့ ရထား ပြေးဆွဲမှုရပ်နားထားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဝေဘာဂီဘူတာအသုံးပြုနေ သောရထားစီးခရီးသည်များအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ခရေပင်လမ်းနှင့်သုဓမ္မာလမ်းမကြီးတို့ အား ဖြတ်သန်းလျက် ဗိုလ်ခြံ (မင်္ဂလာဒုံ) ဂိတ်ရင်းမှရွှေဗဟိုရ် (တာမွေ)ဂိတ်ဖျားပြေးဆွဲနေ သော YBS 18 မီနီယာဉ်လိုင်းမှ ယာဉ်စီးရေ ၁ဝ စီးအား ဝေဘာဂီ ဘူတာတွင် ခြောက်လကြာ ယာယီဂိတ်ရင်းပြုလုပ်ကာ မူလခွင့် ပြုလမ်းကြောင်းအတိုင်း ပြေးဆွဲ ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ပုရွက်ဆိတ်ကုန်းဘူတာမှ ရထားစီးခရီးသည်များအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ထောက် ကြန့်ဂိတ်ရင်းမှ မူလခွင့်ပြုလမ်း ကြောင်းအတိုင်း မောင်းနှင်လာရာမှ ဥက္ကာလမ်း၊ ပုရွက်ဆိတ်ကုန်းဘူ တာရှိရာသို့ ဝင်ရောက်ပြေးဆွဲကာ မူလခွင့်ပြုလမ်းကြောင်း အတိုင်း ပြေးဆွဲပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဦးလှအောင်က ပြောသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် မြန်မာ့မီးရထားအောက်မြန်မာပြည်ရုံးတွင်ပြုလုပ်သည့် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် မြို့ပတ်အရှေ့ခြမ်းနှင့်အ နောက်ခြမ်းတို့ကို အဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းစတင်မည့်အစီအစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဦးလှအောင်က အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြော ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”မြို့ပတ်ရထားအရှေ့ခြမ်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရင် ရထားနှစ်လမ်းစလုံးခြောက်လပိတ်ထား မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတော့ အဲဒီလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘူတာငါးခုက ရထားစီးခရီးသည်တွေအဆင်ပြေစွာသွားလာနိုင်ဖို့ YBS ယာဉ်လိုင်း တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဘာဂီဘူတာမှာခရေပင်လမ်းကို ဖြတ်သန်းပြေးဆွဲနေတဲ့ YBS 18 ၁ဝ စီးကိုဝေဘာဂီဘူတာမှာအခြေပြုပြေးဆွဲပါမယ်။ ပုရွက်ဆိပ်ကုန်းဘူတာကို YBS 92 ယာဉ်လိုင်းပေါ့။ ထောက်ကြန့်ကနေ ဇဝနထိဆွဲပါတယ်။ အဲဒီလိုင်းကို သီးသန့်ပုရွက်ဆိပ်ကုန်းဘူတာကို ခရီးစဉ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဖြည့်စွက်ပြေးဆွဲပေးမယ်။ YBS 92 ယာဉ်လိုင်းအားလုံး ပုရွက်ဆိတ် ကုန်းဘူတာကိုဖြတ်သန်းပြေးဆွဲ ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ယာဉ်စီးခအနေဖြင့် တိုးချဲ့ ပြေးဆွဲပေးသည့်လမ်းပိုင်းများအတွက်ကို ကျပ်တစ်ရာသာ ကောက် ခံသတ်မှတ်ပေးထားကြောင်းသိရသည်။ မင်္ဂလာဒုံဘူတာနှင့်မင်္ဂလာဒုံ ဈေးဘူတာအသုံးပြုနေသော ရထားစီးခရီးသည်များအနေဖြင့် ခရေပင်လမ်းနှင့်ပြည်လမ်းမကြီးများသို့ဖြတ်သန်းပြေးဆွဲနေသော YBS ယာဉ်လိုင်းများအားအသုံးပြု သွားလာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မြောက်ဥက္ကလာပဘူတာအသုံးပြုခရီးသည်များအတွက် YBS 64 ယာဉ်လိုင်းသည် မြောက်ဥက္ကလာဘူတာအနီးတွင် ဂိတ်ရင်းဖွင့်လှစ် ပြေးဆွဲနေခြင်းကြောင့် သွားလာ ရေးအဆင်ပြေမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြို့ပတ်လမ်းပိုင်းအနောက် ခြမ်းဖြစ်သည့် အင်းစိန်-ကြည့်မြင် တိုင်ကြား(၅ ဒသမ ၅)မိုင်အကွာ အဝေးနှင့်မြို့ပတ်လမ်းပိုင်းအရှေ့ခြမ်းဖြစ်သည့် တညင်းကုန်း-ပု ရွက်ဆိတ်ကုန်းကြား(၇ ဒသမ ၂၅) မိုင်အကွာအဝေးကို ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်မှစ၍ တစ်ချိန်တည်းတစ် ပြိုင်တည်း ရထားလမ်းအဆင့်မြှင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ မီးရထားတိုင်းအမှတ်(၇)မှသွား လာရေးမန်နေဂျာဦးဇော်လွင်က ပြောသည်။
”အနောက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ အင်းစိန်-ကြည့်မြင်တိုင်ကြား အဆင့် မြှင့်တင်တာကို တစ်လမ်းပိတ်တစ်လမ်းဖွင့်စနစ်နဲ့သွားမယ်။ အရှေ့ ခြမ်းဖြစ်တဲ့ တညင်းကုန်း-ပုရွက်ဆိတ်ကုန်းကြားကို အဆင့်မြှင့်ရင် တော့ နှစ်ပိုင်းပေါ့။ တညင်းကုန်း နဲ့ကျိုက္ကလဲ့ဘူတာအထိက တစ်လမ်းမောင်းစနစ်နဲ့ ဆောင်ရွက်မယ်။ စီမံကိန်းကာလက လေးလ ကြာမယ်ခန့်မှန်းထားတယ်။ကျိုက္ကလဲ့ဘူတာနဲ့ပုရွက်ဆိပ်ကုန်းဘူတာ ကြားကိုတော့ နှစ်လမ်းလုံးပိတ်ပြီး အဆင့်မြှင့်မယ်။ ခြောက်လကြာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ တညင်းကုန်း-အင်းစိန်ကြား လမ်းပြုပြင် ခြင်းလုပ်ငန်းကို ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုလ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝ ရက်တွင် အဆင့်မြှင့်တင်မှုအားလုံးပြီးစီး မည်ဖြစ်သည်။
နာဂလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့များ လေ့လာနိုင်ရန် ယာဉ်တန်းများဖြင့် ကိုးရက်ကြာ သွား??
ကျောက်ထုတ် စခန်းသုံးခုသို့ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ရှောင်တခင် ဝင်စစ်၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုး??
ရန်ကုန်နှင့် နေပြည်တော်တို့တွင် အစိုးရတိုင်ကြားရေး ယန္တရား ငါးခုထားရှိပြီးဖြစ်